U.S. provides $60.55mln to feed one million Zimbabweans in lean season – Media Bypass
Home/World/Africa/Zimbabwe/U.S. provides $60.55mln to feed one million Zimbabweans in lean season
“The United States remains committed to responding to the humanitarian situation, providing critical food assistance to Zimbabwe’s most vulnerable, while responding to the COVID-19 pandemic and maintaining essential services,” Ambassador Brian Nichols said.
“WFP would like to thank the American people for their generosity and steadfast commitment to the people of Zimbabwe at this critical time. Our Lean Season Assistance programme addresses the urgent food needs of the most vulnerable Zimbabweans, who are facing a triple threat of climate induced drought, economic crisis, and the COVID-19 pandemic,” said WFP Zimbabwe Country Director and Representative Niels Balzer.
In June, USAID announced an additional $10 million to ensure that nearly 100,000 people in eight urban areas have access to adequate food supplies between July and December 2020. The United States remains the largest bilateral donor of emergency humanitarian assistance in Zimbabwe. During the 2019/20 lean season, USAID provided more than $86.9 million to reach more than 1.8 million food insecure Zimbabweans in 22 rural districts throughout the country.